Donald Trump ကို အဓိက ကာကှယျပေးနသေူက ဘယျသူဖွဈမလဲ ? ? ? – SoShwe
Home/Other/Donald Trump ကို အဓိက ကာကှယျပေးနသေူက ဘယျသူဖွဈမလဲ ? ? ?
Mandatory Credit: Photo by Susan Walsh/AP/REX/Shutterstock (9664915b) Melania Trump, Donald Trump. President Donald Trump kisses first lady Melania Trump following an event where Melania Trump announced her initiatives in the Rose Garden of the White House in Washington, . The first lady gave her multipronged effort to promote the well-being of childrenaminimalist new motto: "BE BEST." The first lady formally launched her long-awaited initiative after more thanayear of reading to children, learning about babies born addicted to drugs and hostingaWhite House conversation on cyberbullying Melania Trump, Washington, USA - 07 May 2018
Donald Trump ကို အဓိက ကာကှယျပေးနသေူက ဘယျသူဖွဈမလဲ ? ? ?
admin June 15, 2020	Other Leaveacomment
Melania Trump တဈယောကျကတော့ သူမရဲ့ အမြိုးသားလိုပဲ အိမျဖွူတျောမှာ သမိုငျးသဈတဈခု တညျဆောကျ နပေါတယျ။ Trump နဲ့ မတူတာကပြွနျတော့ ထိပျတနျးအမြိူးသမီး တဈယောကျအနနေဲ့ သိုသိုသိပျသိပျနနေပွေီး အခွား သမ်မတကတျောတှနေဲ့ မတူညီတဲ့ အပွုအမူတှကေို လုပျဆောငျနလေရေဲ့ . . .
အိမျဖွူတျောမှ နှုတျထှကျလာတဲ့ အလုပျသမားတဈယောကျဖွဈသူ Cliff Sims ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ သူတို့ရဲ့ ဆကျဆံရေးအခွအေနဟော 2016 သမ်မတရှေးကောကျပှဲကတညျးက ကမောကျကမဖွဈနပွေီး တျောတျောလေးညှိယူကာ ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျး နနေခွေငျးဖွဈတယျဆိုပွီး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
သမ်မတရှေးကောကျပှဲမှာ “တို့တှအေတူတူ ရှဆေ့ကျသှားကွမယျ။ Trump ဟာ အရမျးကွီးကယျြတဲ့သမ်မတ တဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျလိမျ့မယျ” လို့ Melania က ပွောကွားခဲ့ပမေယျ့ တဈကယျတမျးတော့ ဆနျ့ကငျြဖကျအသှငျ ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ထိပျတနျးအမြိူးသမီးက ပြျောရှငျမှုတှပြေောကျဆုံးနပွေီး မကျြရညျနဲ့ မကျြခှကျဖွဈနပွေီ .. လို့ သတငျးမြားထှကျပျေါလာပမေယျ့ သမ်မတနဲ့ သူ့ရဲ့ အဖှဲ့ဝငျမြားကတော့ ပွတျပွတျသားသား ငွငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။
“အဆငျနိမျ့တဲ့ ဝနျထမျးကပွောပွီး ကိုယျပိုငျဇာတျလမျးတှေ လြှောကျထှငျပွီးရေးတတျတဲ့ ခပျပေါပေါ စာအုပျကထုတျထားတာပါ။ သူကိုယျသူ တကျယောငျကား လုပျနပေမေယျ့ အမှနျတော့ သုံးစာလို့ မရတဲ့ အပိုအလုပျတှလေိုပါပဲ။ အရှုပျထုပျတဈခုသာသာပါပဲ” လို့ Trump ကရေးသားခဲ့ပါတယျ။
“အိမျထောငျရေးတိုငျးမှာ အဆငျပွတေဲ့ရကျရှိသလို မပွတေဲ့ရကျတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အခွအေနနေဲ့ အခြိနျအခါပျေါလိုကျပွီး ပွောငျးလဲနတောပါ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောမွငျရတာကတော့ Melania ရဲ့ ထောကျပံ့မှုက ဘယျတော့မှ လြော့နညျးသှားတယျဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သူရဲ့ ထိပျတနျးအမြိူးသမီးဆိုတဲ့ နရောကိုလညျး အရမျးအရေးပေးသလို သူယောကျြားအတှကျ အရဲဝငျ့ဆုံး ကာကှယျသူအနနေဲ့ပါ တဈစကျကလေးမှ မလြော့ပါဘူး . . .” ဆိုပွီး Sims မှ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“Sims ပွောပုံအရဆိုရငျ Melania က နတေို့ငျး အခြိနျတျောတျောမြားမြားကို အိမျဖွူတျောနဲ့ ပကျသကျတဲ့ အတငျးသတငျးကိစ်စတှဆေီမှာ အသုံးခတြယျ . . . ” လို့ Communication Director တဈယောကျဖွဈတဲ့ Mike Dubke ရေးတဲ့ comment တဈခုအပျေါ သူမတျောတျောတငျးသှားပွီး Leakers ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးအပျေါမှာ Dubke က အပွဈတငျထားတဲ့ အကွောငျးကို Trump ကို အသိပေးခဲ့ပါတယျ။ သိပျမကွာခငျလပိုငျးလောကျမှာပဲ Dubke ရဲ့ ရာထူးမှ နှုတျထှကျတဲ့အကွောငျးကို သိရှိရပါတယျ။
Sims ထပျရေးတာကတော့ Melania ဟာ အိမျဖွူတျောရဲ့ Social Events တှကေအစ ဝငျရောကျ ကွညျ့ရှုသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ တဈခါတုနျးကဆိုရငျ ဝနျထမျးတဈယောကျကို ကြေးဇူးတျောနနေဲ့ဆိုငျတဲ့ ယုနျအကငြ်္ီ ဝတျထားတာကို မကျြလုံးထဲ သဘောမကတြာနဲ့ ခြှတျခိုငျးတော့တာပါပဲ။
Melania က လူရှေ့ စကားပွောရတာနဲ့ ဗီဒီယို ရိုကျရတာကို ကွောကျတတျပါတယျ။ တဈခါတဈလေ သူမရဲ့ အသံတှကေတုနျရီနပွေီး မသဲကှဲတော့ပဲ သူမပွောတာတှကေို နားမလညျနိုငျတော့ပါဘူး။ လူအမြားရှေ့ စကားပွောစရာကိစ်စရှီလာပွီဆိုရငျ နရေ့ောညပါ လကေ့ငျြ့တော့ပါပဲ လို့ Sim က ထပျမံပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။
Donald Trump ကို အဓိက ကာကွယ်ပေးနေသူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ? ? ?
Melania Trump တစ်ယောက်ကတော့ သူမရဲ့ အမျိုးသားလိုပဲ အိမ်ဖြူတော်မှာ သမိုင်းသစ်တစ်ခု တည်ဆောက် နေပါတယ်။ Trump နဲ့ မတူတာကျပြန်တော့ ထိပ်တန်းအမျိူးသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ သိုသိုသိပ်သိပ်နေနေပြီး အခြား သမ္မတကတော်တွေနဲ့ မတူညီတဲ့ အပြုအမူတွေကို လုပ်ဆောင်နေလေရဲ့ . . .
အိမ်ဖြူတော်မှ နှုတ်ထွက်လာတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သူ Cliff Sims ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာ 2016 သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကတည်းက ကမောက်ကမဖြစ်နေပြီး တော်တော်လေးညှိယူကာ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နေနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ “တို့တွေအတူတူ ရှေ့ဆက်သွားကြမယ်။ Trump ဟာ အရမ်းကြီးကျယ်တဲ့သမ္မတ တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လိမ့်မယ်” လို့ Melania က ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်းတော့ ဆန့်ကျင်ဖက်အသွင် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ထိပ်တန်းအမျိူးသမီးက ပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေပြီး မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်ဖြစ်နေပြီ .. လို့ သတင်းများထွက်ပေါ်လာပေမယ့် သမ္မတနဲ့ သူ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်များကတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
“အဆင်နိမ့်တဲ့ ၀န်ထမ်းကပြောပြီး ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းတွေ လျှောက်ထွင်ပြီးရေးတတ်တဲ့ ခပ်ပေါပေါ စာအုပ်ကထုတ်ထားတာပါ။ သူကိုယ်သူ တက်ယောင်ကား လုပ်နေပေမယ့် အမှန်တော့ သုံးစာလို့ မရတဲ့ အပိုအလုပ်တွေလိုပါပဲ။ အရှုပ်ထုပ်တစ်ခုသာသာပါပဲ” လို့ Trump ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။
“အိမ်ထောင်ရေးတိုင်းမှာ အဆင်ပြေတဲ့ရက်ရှိသလို မပြေတဲ့ရက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါပေါ်လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မြင်ရတာကတော့ Melania ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုက ဘယ်တော့မှ လျော့နည်းသွားတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သူရဲ့ ထိပ်တန်းအမျိူးသမီးဆိုတဲ့ နေရာကိုလည်း အရမ်းအရေးပေးသလို သူယောကျာ်းအတွက် အရဲဝင့်ဆုံး ကာကွယ်သူအနေနဲ့ပါ တစ်စက်ကလေးမှ မလျော့ပါဘူး . . .” ဆိုပြီး Sims မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“Sims ပြောပုံအရဆိုရင် Melania က နေ့တိုင်း အချိန်တော်တော်များများကို အိမ်ဖြူတော်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အတင်းသတင်းကိစ္စတွေဆီမှာ အသုံးချတယ် . . . ” လို့ Communication Director တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mike Dubke ရေးတဲ့ comment တစ်ခုအပေါ် သူမတော်တော်တင်းသွားပြီး Leakers ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအပေါ်မှာ Dubke က အပြစ်တင်ထားတဲ့ အကြောင်းကို Trump ကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်လပိုင်းလောက်မှာပဲ Dubke ရဲ့ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်တဲ့အကြောင်းကို သိရှိရပါတယ်။
Sims ထပ်ရေးတာကတော့ Melania ဟာ အိမ်ဖြူတော်ရဲ့ Social Events တွေကအစ ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတုန်းကဆိုရင် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတော်နေ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ ယုန်အင်္ကျီ ၀တ်ထားတာကို မျက်လုံးထဲ သဘောမကျတာနဲ့ ချွတ်ခိုင်းတော့တာပါပဲ။
Melania က လူရှေ့ စကားပြောရတာနဲ့ ဗီဒီယို ရိုက်ရတာကို ကြောက်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သူမရဲ့ အသံတွေကတုန်ရီနေပြီး မသဲကွဲတော့ပဲ သူမပြောတာတွေကို နားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး။ လူအများရှေ့ စကားပြောစရာကိစ္စရှီလာပြီဆိုရင် နေ့ရောညပါ လေ့ကျင့်တော့ပါပဲ လို့ Sim က ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
Previous နာမညျကွီးသတငျးဌာနကွီးတဈခုကို Twitter ကနတေဆငျ့ တိုကျခိုကျလိုကျတဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုသမ်မတ Donald Trump
Next ISIS အကွမျးဖကျအဖှဲ့ကို ကိုယျရေးမှတျတမျးပို့ခဲ့တဲ့သူ ထောငျဒဏျ အနှဈ ၂၀ ခမြှတျခံရ။